भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया बन्यो विश्व च्याम्पियन - नेपालबहस
भारतलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया बन्यो विश्व च्याम्पियन
| १६:२०:४० मा प्रकाशित
२५ फागुन एजेन्सी । सातौँ संस्करणको महिला टी ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि अष्ट्रेलियाले जितेको छ । आईतबार भएको फाइनलमा भारतलाई ८५ रनले पराजित गर्दै अष्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको हो ।
मेलबर्न स्तिथ एमसीजीमा १ सय ८५ रनको लक्ष्य पछाएको भारतले १९ ओभर १ बलमा ९९ रन बनाउँदा अल आउट भयो । भारतको लागि दिप्ती शर्माले ३३ रनको सर्वाधिक इनिङ्स खेलिन् । यस्तै भेडा क्रिश्नामुर्तीले १९, रिचा घोसले १८ रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अंक छुन सकेनन् ।
अष्ट्रेलियाकी मेगान स्चुट्टले ४ तथा जेस जोनासेनले ३ विकेट हात पारिन् । यसअघि अष्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १ सय ८४ रन बनायो । अष्ट्रेलियाको ठुलो स्कोरमा बेथ मोनीले सर्वाधिक ७८ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन् । ५४ बल खेलेकी मोनीलले १० चौका प्रहार गरिन् ।
यस्तै एल्स्या हेलीले आक्रामक ७५ रनको अर्धशतकीय इनिङ्सको योगदान गरिन् । उनले ३९ बलमा ७ चौका र ५ छक्का प्रहार गरिन् । कप्तान मेग लानिन्नले १६ रन बनाउँदा निकोला केरी ५ रनमा अविजित रहिन् । भारतकी दिप्ती शर्माले २ तथा पुनम यादब र राधा यादबले समान १र१ विकेट लिए ।
यससंगै अष्ट्रेलियाले महिला टी ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि पाँचौं पटक जितेको छ । महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा सर्वाधिक उपाधि जित्ने राष्ट्र अष्ट्रेलिया हो । अष्ट्रेलिया बाहेक इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इण्डिजले १र१ पटक विश्व विजेता बनेका छन् । अष्ट्रेलियाले सन् २०१०, २०१२, २०१४ र २०१८ मा विश्वकप जितेको थियो ।
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? १० मिनेट पहिले
स्वदेश आवागमन नियमनको सहजीकरण गर्दै अध्यागमन २ हप्ता पहिले
कोरोनासँग कांग्रेसले कसरी लड्ने ? १२ महिना पहिले
विकास समितिको विधेयकको मस्यौदा बनाउन शुरु ३ महिना पहिले
कोरोनाले आज थप १५ को मृत्यु, १३५९ जना कोरोनामुक्त ५ महिना पहिले
विमानस्थलको क्षमता बढाउन १७ अर्ब ७० करोड ऋण स्वीकृत ६ महिना पहिले